Akhri: Qodobada dastuurka ee isku diray madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 26 October 2014 26 October 2014
Mareeg.com: Shalay subax (25-10-2014) R/wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa soo saaray qoraal uu isku shaandheyn kula sameeyey qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada, arrintaas oo saameysay saaxiibka 1-aad ee madaxweyne Xasan Sheekh ninka lagu magacaabo Faarax Sheekh C/qaadir oo laga qaaday xilka wasiirkii Cadaalada iyo Arrimaha Dastuurka, waxaana loo dhiibay xilka wasiirka Xanaanada Xoolaha.
Xalay fiidkii, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u diiday isku shaandheyntaas, wuxuuna faray wasiir kasta inuu hayo shaqadii uu horay u hayey, isagoo talaabada R/wasaaraha ku tilmaamay mid aan dastuuri aheyn.
Madaxweyne Xasan ayaa bayaanka kazoo baxay xafiiskiisa ku sheegay inuu muddo dheer u dulqaadanayey falal qalafsan uu sharci hareer-mar ah oo uu R/wasaaruhu ku kacay, marka akhrisite waxaa lama huraan ah in la ogaado cidda dasruutka hadda jira uu siinayo awoodda xil ka qaadista wasiirada.
Maxaa Dastuurka Soomaaliya ka qabaa arrintaan?
Doqobada 90-aad iyo 100-aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo R/wasaaraha, waana tan keentay in Cabdi Weli Sheekh ku dhaqaaqo xil ka qaadis iyo magacaabis wasiiro isagoo aan la tashan madaxweynaha.
Sidoo kale, waxaa qodobadaani keeneen in madaxweyne Xasan ku doodo in R/wasaaruhu xil ka qaadista sameeyey inagoo aan la tashan madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ah.
Akhri qodobada awood siinta R/wasaaraha:
Qodobka100aad: Xilka iyo awoodda Ra’iisul-wasaaraha
Awoodaha Ra’iisul-wasaaraha waa:
(a) Madaxa Xukuumadda Federaalka ah
(b) Magacaabista iyo xil ka qaadista xubnaha Golaha wasiirada
(c) Horgeynta Golaha Shacabka xubnaha Golaha Wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda si ay u ansixiyaan.
(d) Inuu qabto howlaha kale ee loogu xilsaaray dastuurka ama sharci kale ee waafaqsan dastuurka iyo qiyamkiisa.
Marka la eego faqrada (b) ee qodobkaan oo ah, shardi maaha in R/wasaaruhu la tashado madaxweynaha ama cid kale marka uu xil ka qaadayo wasiir ama soo magacaabayo. Qodobkaan ayaana sida muuqata ah mid uu ku doodi karo R/wasaare Cabdi Weli oo isku shaadheynta sameeyey isagoo aan la tashan madaxweyne Xasan Sheekh.
Akhri qodobada awood siinta Madaxweynaha:
Qodobka 90aad: Xilka iyo awoodaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
Awoodaha iyo xilka madaxweynaha waxaa ka mid ah:
(a) Wuxuu ku dhaqaaqaa xaalad degdeg iyo xaaladda dagaal si waafaqsan sharciga
(b) Waa taliyaha guud ee Ciidamada Qalabka Sida
(c) Wuxuu magacaabaa taliyaasha ciidamada heer federal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan Golaha Wasiirada.
(d) Wuxuu magacaabayaa xilka wasiirka koowaad, wuxuuna xilka ka qaadayaa ama kala dirayaa xukuumadda haddii ay weydo codka kalsoonida Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah oo ah cod hal-dheeri ah (50%+1).
(e) Wuxuu xilka ka qaadayaa Wasiirrada, Wasiiru-dowlayaasha, Wasiir-ku-xigeenada, markuu soo jeediyo wasiirka koowaad.
Marka la eego faqrada (e) ee qodobkaan, waxaa xil ka qaadista wasiirada iska leh madaxweynaha, waxaase shardi ah in marka hore uu soo jeediyo wasiirka koowaad oo loola jeedo R/wasaaraha. Qodobkaan ayaa ah mid uu ku doodi karo madaxweyne Xasan Sheekh, oo leh “Waa khalad in R/wasaaruhu xilka ka qaado wasiir isagoo aan ila tashan”.
Khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa ah mid ka dhashay dastuurka, kaasoo markii horaba isku qasay awoodahooda, marka waxaa dadka sharciga wax ka yaqaana rumeysan yihiin in arrintaan ay sii adkaan doonto.
Beledweyne: Beeshii gubtay calanka Jabuuti oo dhigtay debadbax raali gelin ah
Categories Select Category Af Soomaali (10,686) Africa (2,403) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (30) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (176) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (274) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (57) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (629) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (18) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (59) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,468) Archive of mareeg (12) Sports (290) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (252) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)